होशियार, अब श्रीमती बलात्कार गर्नेलाई ३ वर्ष सम्मको जेल सजाय !::kamananews
होशियार, अब श्रीमती बलात्कार गर्नेलाई ३ वर्ष सम्मको जेल सजाय !
जेठ,३१/ आफ्नै श्रीमतीलाई जबरजस्ती करणी गर्ने श्रीमान्लाई तीन वर्ष जेल सजाय भएकाे छ । जिल्ला अदालत ताप्लेजुङका न्यायाधीश कृपासुर कार्कीले बुधबार श्रीमान्लाई ३ बर्ष कैद सजाय र ५० हजार क्षतिपूर्ती दिलाउन आदेश दिएका हुन् ।
पीडक श्रीमान्ले बयानका क्रममा आफ्नो जायजेथा नभएको बताएपछि उनको जायजेथा भए त्यसैबाट र नभए सरकारबाट पीडितलाई ५० हजार क्षतिपूर्ति दिलाउन अदालतले आदेश दिएको हो । फुङलिङ नगरपालिका घर भई फक्ताङलुङ गाउँपालिका बस्दै आएका पीडकको नाम खोल्दा पीडित समेतलाई असर गर्ने भएकाले दुबैको नाम गोप्य राखिएको छ ।
ओली सरकारको अर्को करामातको पर्दाफास – पढ्नुहोस
काठमाडौँ । देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको आवास सुविधामा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा करिब २२ करोड खर्च भएको छ । पानी र बिजुली शीर्षकमा ३ करोड ४९ लाख खर्च भएको छ । ट्यांकरको पानी खरिदमा मात्रै १...
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको बिदा आजदेखि सकिँदै, मिश्रलाई समेत अदालतको जिम्मेवारी नदिने चलखेलमा ने क पाका अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडाैं ३, भदाै । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशबाट अस्वीकृत गरेपछि बिदामा बसेका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको बिदा आजदेखि सकिँदैछ। समितिबाट अस्वीकृत भएपछि साउन साउन २० गतेदेखि बिदामा छन् । १५ दिनका लागि...
प्रचण्डले खोले यस्तो सनसनीपूर्ण घटना – दरबार देखि विभत्स दोरम्बा हत्या काण्ड सम्म
दोरम्बा हत्याकाण्ड हुँदा म तत्कालीन नेकपा माओवादी रामेछाप जिल्लाको इन्चार्ज थिएँ। त्यस दिनको बैठकको प्रमुख अतिथि म नै थिएँ। मैनकुमार मोक्तान तत्कालीन जिल्ला पार्टीका सचिव, मेरी पत्नी अम्बिका दाहाल इलाका सेक्रेटरी र जनसरकार प्रमुख बाबुराम...
सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे बजार बगरमा परिणत, साँधीखोला माथिको पुल पूरै बग्यो
३ भदौ,२०७५ सिन्धुपाल्चोक । शुक्रबार राति आएको वर्षाले क्षतीग्रस्त बनाएको अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत खोर्सानीबारीमा रहेको पक्की पुल शनिबार रातिको बाढीले पूर्ण रुपमा बगाएको छ । बाढी बजार क्षेत्रमा पसेपछि बजार बगरजस्तो भएको छ । शुक्रबार...
शंकर पोखरेलले ज्वाइँलाई अध्यक्ष बनाएपछि, अाेलीलार्इ नेता माधवकुमारले दिए यस्ताे थ्रेट – नेकपामा खैलाबैला
काठमाडाैँ । खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिलेर गत जेठ ३ गते एमाले र माअाेवादीबीच एकिकरण गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पार्टी गठन गरेका थिए। दुवै पार्टीकाे एकिकरणपछि तल्लाे तहकाे कमिटीलार्इ पनि एकिकरणकाे...
प्रधानन्यायाधीश पदमा मिश्रलार्इ अयाेग्य ठहराउन प्रचण्डले बनाए यस्ताे खतरनाक याेजना
काठमाडाैँ । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीकाे नाम केही दिन अघि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अस्वीकृत गरेपछि फेरि प्रधानन्यायाधी पदका लागि चर्चा सुरु भएकाे छ। सर्वाेच्चमा रहेका न्यायाधीशहरुकाे लाइनमा वरिष्ठतम न्यायाधीश जाेशी पछि अाेम प्रकाश मिश्र...